ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ချိုသောမာယာ
မာယာလေးတွေ အကြောင်းဖတ်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ ပြုံးပြီး ပြန်သွားပါတယ်ကွယ်။
ကလေးရဲ့ အနာဂတ်အရေး ရင်လေးတယ်.
သြော် .. ဒါလေးတွေ လိုတယ်လား .. :P
တခါတလေ ကိုယ့်အမြင်မှာ မုသားထင်ရပေမယ့်
အပြင်ပန်းကြည့်ရုံနဲ့ အတွင်းစိတ်ကို မြင်နိုင်ဖို့ရာ
ကိုယ်တိုင်ရော မုသားချိုချိုတွေ အများကြီးကြုံနေပြီလားး)
ချစ်စရာ မာယာ ချိုချိုလေး ဖတ်ပြိး ပြုံးသွားတယ် ကိုမျိုး...:)
ဒါပေါ့ အလိမ်မာ အိမ်ပါဆိုတာ လိမ်လည်းလိမ်တယ် အကြောလည်းမာတယ် ဆိုတဲ့ အိမ်ရှင်မမျိုးလေ...ဒါမျိုးသာ ရှာယူပေတော့ မောင်မျိုးရေ
ဒါဟာ မုသားတွေ ဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်ရေး လင်္ကာ ချောဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်ညီရေ...၊း) ဒီလင်မယား ကိုတော့ မျက်စိထဲ ကောင်းကောင်း မြင်သွားတယ်....။
You better try to find it out.Then label "what is it?":):)
ဒါ အရင်မောင်မျိုး မဟုတ်ဘူး။
စိတ်တွေ ပူပန်နေတဲ့ မောင်မျိုးဖြစ်နေတယ်။
ဒါမယ့် ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ်။
မုသားပေမယ့် ချိုမြိန်စေရင် တော်သေးတာပေါ့။
ရေးထားတာ စရိုက်တွေ ပီပြင်တယ်။ ဖတ်လို့ကောင်းပါ့။
မကုလားမ သူ့ ယောက်ျားကို ချစ်သားပဲ။ မုသားသုံးတာက ကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့သုံးတော့လည်း အပြစ်လို့ ဆိုချင်ပေမယ့် ....
ရပ်ကွက်ထဲမှာလည်း အဲလို လင်မယားရှိတယ်။ အမျိုးသမီးလုပ်သူက ငါးရောင်းတယ်။ သူတို့ကောင်းနေချိန်ဆို မောင်ရေ.. ယောင်္ကျားရေ..ဆိုပြီး ချွဲနေလိုက်ကြတာ..သူ့ယောင်္ကျားမူးလို့ရစ်နေချိန်ဆို.. အဆဲပေါင်းစုံကိုကြားရတော့တာ..တကယ်တော့မူးတာက ယောင်္ကျား.. ဒါပေမယ့်မူးသူကအသံမထွက်ဘူး.. အသံထွက်သူက သူ့မိန်းမလေ..သူ့ဆဲဆိုရစ်ဖြစ်သံကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်က သူ့ယောင်္ကျားမူးတာကိုသိရတာ.. မနက်ကျတော့လည်း...ယောင်္ကျားရေ..မိန်းမရေ..ဖြစ်သွားပြန်ရော... :)
မာယာမပါရင် ဘဝဟာမချောမွေ့ဘူးတဲ့။ ဟုတ်လို့လားနော်